Dhangadhi Khabar | किन भइरहन्छ थुनुवाको हिरासत ‘ब्रेक’ ? प्रहरी मिलेमतो कि लापरबाही ?
किन भइरहन्छ थुनुवाको हिरासत ‘ब्रेक’ ? प्रहरी मिलेमतो कि लापरबाही ?
काठमाडौं - इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारी झापाको हिरासत ‘ब्रेक’ गरेर आइतबार राती २ थुनुवा फरार भए।
अभद्र व्यवहार मुद्दामा पक्राउ परेका २ भारतीय नागरिक २६ वर्षीय गणेश कामती र २९ वर्षीय कृष्ण मण्डल फरार भएका हुन्। हिरासतको ढोकामा लगाइएको ताला तोडेर उनीहरू भागेको प्रहरीले बताएको छ।
सुरक्षाकर्मीको चौघेरामा रहने हिरासतबाटै ताला फोडेर उनीहरु भागे कसरी? ताला फुटाउन्जेल किन प्रहरीले चाल पाएन? प्रहरीको मिलेमतो बिना यस्तो सम्भव छ त?
प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ प्रहरीले दिन सकेको छैन। जिल्ला प्रहरीका कार्यालय झापाका डिएसपी महेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कसरी भागे अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
थुनुवा भागेका बेला ड्युटीमा रहेका एक प्रहरी जवानलाई निलम्बन गरेर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। निलम्बित प्रहरी जवानले आफू ट्वाइलेट गएको बेला ताला फोडेर थुनुवा भागेको जवाफ दिएका छन्। डिएसपी श्रेष्ठको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।
दुई भारतीय थुनुवाको हिरासत ‘ब्रेक’ घटना नौलो भने होइन। यसको दुई दिनअघि मात्रै काठमाडौंको सिंहदरबार वृत्तबाट ४ थुनुवा हिरासत ‘ब्रेक’ गरेर भागेका थिए।
चोरी मुद्दाका अनिल थापा, सुब्बा लामा र सुकलाल वाइबा र मदन तामाङ गत शनिबार हिरासत ‘ब्रेक’ गरेर फरार भएका थिए। उनीहरुमध्ये ३ जना पक्राउ परे पनि मदन तामाङ भने अझसम्म फरार छन्।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अशोक सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। असई तथा ड्युटी अफिसर भीमबहादुर थापा, ड्युटीमा रहेका हवल्दार बोधबहादुर माझी र चन्द्रबहादुर विक निलम्बनमा परेका छन्।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै थुनुवाको हिरासत ब्रेक हुन थालेको छ। यसले मुख्य गरी दुई विषय इंगित गरेको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। उनका अनुसार हिरासतको कमजोर संरचना र प्रहरीको लापरबाहीमध्ये एउटाले मुख्य भूमिका खेलेको हुनुपर्छ।
अहिलेसम्म भागेका थुनुवाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने हिरासतलाई दोष लगाएर उन्मुक्ति हुने ठाउँ देखिँदैन। अधिकांश घटनामा प्रहरीको लापरबाही देखिएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ। गत असार २३ गते राती महानगरीय प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीको हिरासतबाट निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले थुनुवा भागेको घटनाले पनि प्रहरीको लापबाहीलाई पुष्टि गर्दछ। थुनुवा शमशेर माझी, रुद्रलाल श्रेष्ठ र रविकुमार तिमल्सिना थुनुवा फरार भएका थिए।
माझी र श्रेष्ठ पक्राउ परे पनि तिमल्सिना भने अझै फरार छन्।
म्याद थप गर्न अदालत लगेको बेला अदालतको ट्वाइलेटमा उनीहरुका साथीले पूर्व योजनाअनुसार 'ह्याक्सो ब्लेड' राखिदिएका थिए। सोही ह्याक्सो ब्लेड शरीरमा लुकाएर हिरासतसम्म पुग्न सफल भएका उनीहरूले ग्रिलको रड काटेर भाग्न समेत सफल भएका थिए। अदालतबाट म्याद थप गरेर लगिसकेपछि उनीहरूको शरीर खानतलासी गरिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। तर प्रहरीले यति सामान्य कुरामा समेत ध्यान नदिँदा उनीहरू हिरासत तोडेर भाग्न सफल भएका थिए।
त्यसपछि महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर एसपी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो। समितिले तीन जनालाई निलम्बन गरेको थियो।
यसरी पटक-पटक थुनुवा भागिरहँदा पनि सामान्य विभागीय कारबाहीभन्दा ठूलो सजाय प्रहरीले पाएका छैनन्। छानबिन समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘मिलेमतो गरेर फरार भएको जस्तो देखिँदैन। सामान्य गल्तीको फाइदा उठाएर थुनुवा भागेकाले प्रहरीले त्यही अनुसार कारबाही पाएका हुन्।’
गत असार २८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरा, बाँकेको हिरासत कक्षबाट ३ जना थुनुवा फरार भएका थिए। उनीहरुले हिरासत कक्षको शौचालयको भेन्टिलेटर काटेर भागेका थिए।
गत साउन ७ गते इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढ, बाराको हिरासतबाट भारतको मोतिहारीका १९ वर्षीय फिरोज मियाँ फरार भए। त्यसेबला ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई पनि सामान्य विभागीय कारबाही बाहेक अन्य कारबाही भएको छैन।
प्रहरीले गरेको विभागीय कारबाहीले ड्युटीमा रहेका प्रहरीको सामान्य गल्ती भएको देखिन्छ। तर हिरासत ब्रेक गरेर थुनुवा भाग्ने क्रम भने रोकिएको छैन। प्रहरीकै सुरक्षा घेराभित्र पटकपटक यसरी थुनुवा भाग्नुले प्रहरीकै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका उब्जिएको छ।
३८ थुनुवा तथा कैदी फरार
पछिल्लो एक वर्षमा देशका विभिन्न जेल तथा हिरासतबाट ३८ जना थुनुवा तथा कैदीहरू फरार भइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये अधिकांश चोरी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्ति छन्। फरार भएकामध्ये धेरैलाई पक्राउ गरिसके पनि केही अझै फरार छन्।
दाङबाट फरार भएका थुनुवा अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। सिंहदरबार वृत्तबाटै भागेका एक थुनुवा अझै फरार छन् भने भैंसेपाटीबाट भागेका एक थुनुवा पनि अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
अधिकांश जसो हिरासतको ग्रिल काटेर भागेका छन् भने केही अदालत लैजाने क्रममा भागेका छन्।
यसरी कैदी तथा थुनुवा भाग्नुमा जीर्ण संरचना र ड्युटीमा रहेका प्रहरीका कमीकमजोरी भएको बताउँछन् नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल। लापरबाही गरेको देखिएका प्रहरीलाई कारबाहीसमेत गरिँदै आएको उनको भनाइ छ।
कारागार ऐन २०१९ मा कैदी तथा थुनुवा भगाउनेलाई हुने सजायबारे उल्लेख छ। ऐनका दफा २४ को (क) मा सम्बन्धित अड्डा/अदालतका कर्मचारी वा कारागारका कर्मचारीले घुस लिएर थुनुवा तथा कैदी भगाएमा उक्त घुस जफत गरी थप कारबाही हुन्छ।
जन्मकैदको सजाय पाएको वा त्यस्तो सजाय पाउने अपराध गरेको थुनुवा तथा कैदी भगाए १० वर्षसम्म कैद हुने सो ऐनमा व्यवस्था छ। अरु थुनुवा वा कैदी भगाएको भए २ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद हुन्छ।
अदालत र कारागारका कर्मचारी बाहेक प्रहरी वा अन्य सरकारी कर्मचारीले भगाएमा जन्मकैद पाएको वा त्यस्तो सजाय पाउने खालको अपराध गरेको भए ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। अन्य थुनुवा/कैदीका हकमा भने २ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने समेत व्यवस्था छ।
तर कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा लापरबाही भएकै कारण कैदी तथा थुनुवा भागेको अवस्थामा भने सामान्य सजाय हुने उल्लेख छ। जसमा ५ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ।
कैद म्याद तोकिसकेको कैदी भागेका अवस्थामा यसरी भाग्ने कैदीलाई समेत थप सजाय हुने व्यवस्था छ। कैद भुक्तान गर्न बाँकी सजायको डेढी सजाय हुने व्यवस्था छ।
मुद्दा फैसला भएपछि हुने सजायमा थुनुवा भाग्नुअघि थुनामा बसेको अवधि कट्टा गरिनेछ। यसका साथै थुनामा बसेको समय गणना नगरी तोकिएको कैद सजायमा आधा थप गरी डेढी सजाय तोकिने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
थुनुवा तथा कैदी भागेपछि धमाधम छानबिन समिति गठन गरिए पनि त्यस्ता समितिले अहिलेसम्म मिलेमतोमा भागेको रिपार्ट दिन सकेका छैनन्। सामान्य लापरबाहीका कारण भागेका भन्दै उनीहरूलाई विभागीय कारबाही बाहेक ठूलो कारबाही हुन सकेको छैन। तर थुनुवा र कैदी भाग्ने क्रम भने रोकिएको छैन।
माझी र श्रेष्ठ पक्राउ परे पनि तिमल्सिना भने अझै फरार छन्।म्याद थप गर्न अदालत लगेको बेला अदालतको ट्वाइलेटमा उनीहरुका साथीले पूर्व योजनाअनुसार 'ह्याक्सो ब्लेड' राखिदिएका थिए। सोही ह्याक्सो ब्लेड शरीरमा लुकाएर हिरासतसम्म पुग्न सफल भएका उनीहरूले ग्रिलको रड काटेर भाग्न समेत सफल भएका थिए। अदालतबाट म्याद थप गरेर लगिसकेपछि उनीहरूको शरीर खानतलासी गरिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। तर प्रहरीले यति सामान्य कुरामा समेत ध्यान नदिँदा उनीहरू हिरासत तोडेर भाग्न सफल भएका थिए।
मङ्गलबार २८, साउन २०७६ ०५:५२ मा प्रकाशित